Translateastudy of full closed compres in Burmese
Results forastudy of full closed compressor... translation from English to Burmese
Inastudy of early cases, the median time from exhibiting initial symptoms to death was 14 days, withafull range of six to 41 days.
အစောပိုင်းဖြစ်စဉ်များ၏လေ့လာမှုတွင်၊ ကနဦးရောဂါလက္ခဏာများပြသချိန်မှ သေဆုံးသည်အထိ ပျမ်းမျှအချိန်ကာလမှာ ကြာချိန်အပြည့်အဝ ခြောက်ရက်မှ 41 ရက်နှုန်းဖြင့် 14 ရက်ဖြစ်ပါသည်။
Schools closed foramedian duration of4weeks according toastudy of 43 US cities' response to the Spanish Flu.
စပိန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်စဉ်က အမေရိကန်ရှိ မြို့ကြီး 43 မြို့၏ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် လေ့လာချက်အရ ကျောင်းများကို ပျမ်းမျှကာလ4ပတ်ကြာ ပိတ်ထားခဲ့ပါသည်။
A study of the first 41 cases of confirmed COVID-19, published in January 2020 in The Lancet, revealed the earliest date of onset of symptoms as 1 December 2019.
2020 ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ The Lancet တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် COVID-19 အတည်ပြု လူနာ ပထမ 41 ဦးကို လေ့လာမှုတွင် အစောဆုံး လက္ခဏာများ စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ရက်စွဲကို 2019 ဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့ဟု ဖော်ပြထားသည်။
COVID-19 mainly happened at the age of 30-65 with 47.7% of those patients being over 50 inastudy of 8,866 cases as described above.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူနာ 8,866 ဦးဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ COVID-19 သည် အသက် 30-65 နှစ်အရွယ် လူများကို အဓိကကူးစက်ပြီး အဆိုပါလူနာများထဲတွင် အသက် 50 ကျော်အရွယ်များသည် 47.7% အထိ ရှိသည်။
The estimated mean incubation period of SARS-CoV-2 is 1-14 days, mostly 3-7 days based onastudy of the first 425 cases in Wuhan.
(Wuhan) ဝူဟန်မြို့ရှိ ကူးစက်ခံရသူ 425 ဦးအပေါ် ပြုလုပ်ထားသော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် SARS-CoV-2 ပျမ်းမျှှရောဂါအစပျိုးချိန်သည် 1 ရက်မှ 14 ရက်အတွင်း ဖြစ်ပြီးအများစုမှာ3ရက်မှ7ရက်အတွင်း ဖြစ်သည်။
A study of hand washing in 54 countries in 2015 found that on average, 38.7% of households practiced hand washing with soap.A 2014 study showed that Saudi Arabia had the highest rate of 97 percent; the United States near the middle with 77 percent; and China with the lowest rate of 23 percent.Several behaviour change methodologies now exist to increase uptake of the behaviour of hand washing with soap at the critical times.Group hand washing for school children at set times of the day is one option in developing countries to engrain hand washing in children's behaviors.
2015 ခုနှစ်၌ နိုင်ငံပေါင်း 54 နိုင်ငံတွင် လက်ဆေးမှု လေ့လာချက်အရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း 38.7% ခန့်က ဆပ်ပြာနှင့် လက်ဆေးခြင်းကို ကျင့်သုံးသည်ဟု သိရသည်။ 2014 လေ့လာမှုအရ ဆော်ဒီ အာရေးဘီးယားတွင် 97 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက 77 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အလယ်အဆင့်ရှိကာ တရုတ်နိုင်ငံက 23 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံး အချိန်တွင် ဆပ်ပြာနှင့် လက်ဆေးခြင်း အပြုအမူကို တိုးတက်လာစေရန် အပြုအမူပြောင်းလဲရေး နည်းလမ်းများစွာကို ဖော်ဆောင်ထားသည်။ ကလေးများ၏ အပြုအမူများတွင် လက်ဆေးခြင်းကို ပုံမှန်အပြုအမူအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ ကျောင်းများတွင် တစ်နေ့တာအတွင်း သတ်မှတ်အချိန်များ ကလေးများကို အုပ်စုဖွဲ့၍ လက်ဆေးစေခြင်းမှာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
&quot; Despite the overall success of closing schools,astudy of school closures in Michigan found that &quot;&quot;district level reactive school closures were ineffective.&quot;&quot;During the swine flu outbreak in 2009 in the UK, in an article titled &quot;&quot;Closure of schools during an influenza pandemic&quot;&quot; published in the Lancet Infectious Diseases,agroup of epidemiologists endorsed the closure of schools in order to interrupt the course of the infection, slow further spread and buy time to research and produceavaccine. &quot;
ကျောင်းများပိတ်ခြင်းသည် အလုံးစုံအောင်မြင်မှု ရရှိသော်လည်း မီချီဂန်တွင် ကျောင်းများပိတ်ခြင်းအပေါ် လေ့လာမှုတစ်စောင်အရ “ကျောင်းများပိတ်ခြင်းအပေါ် ခရိုင်အဆင့် တုံ့ပြန်မှုများသည် အကျိုးမဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ကြောင်း” တွေ့ရှိရသည်။ ယူကေတွင် ဝက်တုပ်ကွေးကူးစက်မှု 2009 ခုနှစ်အတွင်း လန်းဆက် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ (Lancet Infectious Diseases) တွင် ဖော်ပြထားသော “တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကျောင်းများအား ပိတ်ခြင်း” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌ ကူးစက်ရောဂါနှိမ်နင်းရေးပညာရှင်များ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကျောင်းများ ပိတ်ခြင်းသည် ကူးစက်ရောဂါ၏ ကူးစက်မှုလမ်းကြောင်းအား ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ပြီး ထပ်မံပျံ့နှံ့မှုအား နှေးကွေးစေကာ သုတေသနလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရာတွင် အချိန်ပိုမိုရရှိနိုင်သည်ဟု ထောက်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
red brick (English>Latin)ano ang underwent (English>Tagalog)not today, satan (English>Latin)offenes (German>Greek)hodaš (Serbian>Finnish)di età augustea (Italian>English)diktat (Swedish>English)क्या वह दूध पीती है (Hindi>English)keputusan diumumkan (Malay>Chinese (Simplified))ok lang yan basta alm mo tama ginagawa mo (English>Tagalog)livet (Norwegian>French)i hope you hadagreat day (English>Tagalog)tumpuan carian (Malay>English)הוכח (Hebrew>English)hernie inguinale (French>Arabic)application performance monitoring (English>Russian)and when you ' re standing with someone , (English>Khmer)cinta sejati (Malay>Tagalog)nak tengok pepek u (Malay>English)wanachoma (Swahili>English)what does it tell you? (English>Tagalog)happy thursday (English>German)off the coast (English>Japanese)neopoziva (Croatian>Turkish)political dynasties (English>Tagalog)